मुटु स्वस्थ राख्ने देखि घाटी दुख्ने समस्याको अ’चुक औधषी हो लिची, यस्ता छन् अन्य फाइदा
Homeसमाचारमुटु स्वस्थ राख्ने देखि घाटी दुख्ने समस्याको अ’चुक औधषी हो लिची, यस्ता छन् अन्य फाइदा
April 22, 2021 admin समाचार 5857
लिची स्वा’दका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । गर्मीको मौ’सम भने आँप, रुख कटहर, लिचीलगायत फलफूलको सिजन पनि हो । सिजन अनुसार फलफुल पनि फरक–फरक खान पा”इन्छ यस्तै यो सिजन अनुसारको फल हो लिचि । देशका विभिन्न स्थानमा गर्मी बढ्दो छ गर्मी सँगै लिचि खानुको छुटै फाइदा छ । यो समयमा बजारमा विभिन्न प्रकारका फल’फुल पाइन्छ । यो समय लिचीको पनि मौस’म हो ।
लिची स्वास्थ्य’वर्धक हुनुका साथै यससँगै पोष्टिक गुण पाइन्छ । लिचीमा कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन सी र बि कम्प्ले’क्ससँगै पोटाशियम, क्याल्शियम जस्ता खनिज पदार्थ पाइन्छ । लिची खाँदा अनुहारमा निखार आउने छ भने चा’उरिपन पनि हट्छ । लिचीमा पाइने क्याल्शियम, फस्फोरसले बच्चाको शारीरिक गठनमा महत्वपु’र्ण भूमिका खेल्छ ।
लिची आनामा’ मुटु स्वस्थ हून्छ भने क्यान्सर सेल्स र ट्युटम पैदा हुनबाट रोक्छ । जसले मलद्धारमा हुने क्यान्सरको खतरा हुँदैन । चिसो लागेको छ र घाटीमादुखेक छ भने पनि लिची खा’नु लाभदायक हुन्छ ।
धेरै फाइदा’जनक भएपनि लिची सिमित मात्रमा मात्र खानुपर्छ । धेरै खाँदा स्वास्थ्यका लागि हानि’कारक हुन्छ । एक पटकमा १०र११ बटा लिची खानु लाभदायक हुन्छ । यो भन्दा धेरै खाएमा टाउको दुख्छ भने शरीर चिलाउने, जिब्रो र ओठ सुन्निनु’का साथै सास फेर्न समेत कठिन हुन्छ ।
यो पनि,दुई हप्तादेखि मकवानपुरको हेटौँडा आसपास क्षेत्रमा लागेको डढेलो र वायु प्र’दूषणका कारणले जिल्लामा आँखाका बिरामीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । वायु प्रदूषण’को जोखिम बढेपछि हेटाँैडाको सामुदायिक आँखा अस्पतालमा आँखाको उपचार गराउनेको सङ्ख्यामा व्यापक’रुपमा वृद्धि भएको सो अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । विगत दुई हप्तादेखि वायु प्रदूषणका कारणले आँखा उपचार गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको अस्पता’लका वरिष्ठ प्रशासक सुधीर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अहिले वायु प्रदूष’णलगायत र अन्य विभिन्न कारणले दैनिक ३५० भन्दा बढी आँखाका बिरामी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने गरेको बताइएको छ । अस्पतालमा आँ’खाको उपचार गराउन आउने अधिकांश बिरामीको आँखा पोल्ने, आँखा रातो हुने र आँखामा एलर्जी हुनेलगायत टाउको दुख्ने सम’स्या रहेको बताइएको छ । अस्पतालमा नियमित आँखा जाँच गराउन आउने र फलोअपका लागि आउने तथा आँखाको शल्यक्रिया गराउन आउनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा रहे’काले सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप बढेको प्रशा’सक श्रेष्ठले बताउनुयो ।
अस्पतालमा हप्ता’मा पाँच दिन आँखाको शल्यक्रिया हुने गरेको छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महा’मारीका कारण दैनिक २०० आँखाका बिरामीको उपचार गर्दै आएको सो अस्पतालले बिरामीको चाप बढेपछि बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म तोक्न दिने गरेको र त्यही समय’देखि उपचार शुरु हुने गरेको बताइएको छ ।
आँखाको सामान्य जाँ’चपश्चात् १५० भन्दा बढीले चश्मा बनाएर जाने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । आँखा अस्प’तालमा आउने सम्पूर्ण सेवाग्राहीमध्ये ५० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमाका सदस्य रहेको बताइएको छ । बीमाबाट चश्मा बना’उन एक आर्थिक वर्षमा एकपटकका लागि रु एक हजार उपल’ब्ध हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी आँ’खाको निजी क्लिनिकमा उपचार गराउने तथा चश्मा पसलमा पनि चश्मा बनाउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताइएको छ । वायु प्रदूषण र धुवाँधुला कारण हेटौँडा अस्पता’लमा रुघाखोकी र नाक, कान र घाँटी तथा एल’र्जीका बिरामीको उपचार गराउनेको सङ्ख्या बढेको सो अस्पतालले जनाएको छ । निजी क्लिनिक र नर्सिङ होममा पनि वायु प्रदूष’णबाट प्रभावित बिरामी उपचार गराउने बढेको ‘पाइएको छ । ओएस नेपालबाट
आज मिति २०७८ साल बैशाख ९ गते बिहिबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
एसएलसी फेल भए’र दुबई गए, बुर्ज खालिफामा का’म गरेर ‘इञ्जिनियर’ बने
श्वेतासंग वि’वादपछि’ लाखौँ खर्च गरेर सुष्मा दिइन् कल्बमा पार्टी(हे’र्नुहोस् भिडियो)
February 15, 2021 admin समाचार 5947
नायिका सुष्मा कार्कीको आज जन्म’दिन परेको छ। १९८५ फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन उनको जन्म भएको थियो। बर्दिया जिल्ला’मा जन्मिएकी सुष्माले ‘मेरो एउटा साथी छ’ चलचित्रबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन्। मोड’लिङ्ग हुँदै चलचित्रमा लागेकी उनले
April 23, 2021 admin समाचार 5506
लगातार उकालो लागेको सुनको भाउ आज भने ‘घटेको छ । आज सुनको भाउ तोलामा आज ५ सय रुपैयाँले घटेको छ ।बुधबा’र प्रति तोला ९२ हजार रुपैयाँ र बिहिबार थप २०० रुपैयाँ वृद्धि भएको सुनको मूल्य
दलालले दुई छोरी सहित श्रीमती उडाए, विदेशमा कमाएको ७ लाख पनि छैन भन्दै रोए श्रीमान (भिडियो सहित)
February 7, 2021 admin समाचार 6880
दागं जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं ६ को श्रीगाउँमा एक अनौठो घ’टना भएको छ । एक २४ वर्षकी महिला आफ्ना २ छोरी समेत लिएर वे’पत्ता भएपछि उनका श्रीमान रुँदै मिडियामा आएका छन् । पवित्रा रावत
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241709)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226495)